सफल B2B लीड जेनेरेसनका लागि दुई सबै भन्दा प्रभावकारी उपकरणहरू Martech Zone
सफल B2B लीड जेनेरेसनका लागि दुई सबैभन्दा प्रभावकारी उपकरणहरू
सोमवार, जुन 15, 2020 सोमवार, जुन 15, 2020 माधवी वैद्य
हामी सबैलाई थाहा छ कि B2B ठाउँ कत्ति जटिल छ र B2B नेतृत्व लिने समय समयमा बढ्दो गाह्रो हुन सक्छ।
नेतृत्व, रूपान्तरण, सम्भावना, प्रक्रिया, प्रणाली र आरओआई कुनै पनि B2B मार्केटरको लि of्गोको एक प्रमुख अंश हो! आखिर यो सबै राजस्वको बारेमा हो र यो दिनको अन्त्यमा भएका नम्बरहरूको बारेमा हो, हैन? गलत!
यहाँ एक वास्तविक हराएको टुक्रा छ र अधिक स the्घर्ष गलत दिशामा हुन सक्छ।
तपाइँको रणनीति को एक महत्वपूर्ण घटक को रूप मा ग्राहक समानुभूति र ग्राहक अनुभव छनौट गर्नुहोस् र तपाइँले पहिले नै हराइरहेको टुक्रा फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन अब पूरा गर्न सक्छ नेतृत्व पुस्ता पजल!
दिनको अन्त्यमा, यसले ग्राहकको अनुभव बढाउनको लागि एक मानवीय जडान लिन्छ र अधिक बढि ल्याउँदछ!
समानुभूति भनेको वास्तविक पीडा पोइन्टहरू र उसले सामना गर्ने कठिनाइहरू बुझ्न सम्भावितिका जुत्ताहरूमा उभिन सक्षम हुनु हो।
समानुभूति र समझ को लागी कुनै व्यवसाय को लागी एक मजबूत आधार बनाउन सक्नुहुन्छ; किनभने यो ह्यान्ड होल्डिंगको शक्ति हो जुन वास्तविक कारण हुन सक्दछ किन कुनै पनि ग्राहकले तपाईंबाट व्यापार चाहन्छ!
यो साच्चै एक दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्धको सुरुवात हुन सक्छ।
तपाईं ती सेवाहरूमा एक सम्भाव्यता मात्र देख्दछन् ती संभावनाहरूको माध्यमबाट तपाईंकहाँ आउँदछ; तर तपाईं र तपाईंको सेवाहरू तिनीहरूको समस्या समाधानकर्ताको रूपमा पनि हेर्नुहोस्।
जब तपाईका समाधानहरू ग्राहकको अनुभव बृद्धि गर्ने बारेमा हुन्छन्, तब यो यात्रा हुन्छ जुन तपाईलाई केहि बेच्न चाहनु अघि ग्राहकलाई चिन्न चाहेको प्रयासको परिणाम हो।
त्यसोभए प्रभावी B2B नेतृत्व उत्पादनको लागि वास्तविक उपकरणहरू के हुन्?
सहि सन्देशको साथ एक ई-मेलर सधैं सही प्रभाव सिर्जना गर्न सक्दछ। एक स्वचालित उपकरण वा अनुप्रयोग वा कुनै अन्य प्रकारको सञ्चारले तपाईंलाई तपाईंको बिक्री लक्ष्यहरू पूरा गर्नतर्फ लैजान सक्छ; तर तपाईंको ग्राहकको कथा थाहा पाउन एक-बाट-एक कल गर्न र कुरा गर्न नबिर्सनुहोस्।
तपाइँको सेवाहरू मार्फत ग्राहकलाई राम्रो ग्राहक अनुभव दिन सक्षम हुनको लागि ग्राहकबाट सीधा समस्या थाहा पाउनुमा त्यहाँ ठूलो फाइदा छ।
श्रोता हुनुले तपाईका लागि धेरै फाइदाहरु ल्याउन सक्छ, किनकि ग्राहकले बुझ्नेछ कि तपाईको दृष्टिकोणलाई बुझ्न तपाई साँच्चिकै इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईको मूल चुनौतीहरुलाई समाधान गर्न तपाईको समाधानहरु पign्क्तिबद्ध गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। यसले केवल तपाइँको ग्राहकलाई जित्न मात्र होइन तर ग्राहकलाई पक्रन पनि लामो बाटोमा जान्छ।
B2B नेतृत्व जेनेरेशन तपाईको ग्राहकलाई सम्बन्ध निर्माणको माध्यमबाट तपाईको सेवाहरूमा रुचि राख्नु नै हो। यदि प्रक्रिया मानवीय छ र मानव जडान स्थापित गर्दछ, परिणामहरू सकरात्मक हुन्छ।
एक साँचो इरादा वा प्रयास प्राय: कहिल्यै ध्यान नदिइन्छ। दिन को अन्त मा, एक नेतृत्व एक मानव छ र त्यसैले संचार को उचित उपयोग सम्भावना बाट एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा गर्न सक्छ।
यदि तपाइँ ब्रान्डको रूपमा कम सोच्नुहुन्छ र मानव वा समस्या समाधानकर्ताको रूपमा बढी; नेतृत्व पुस्ता तब अविश्वसनीय परिणाम दिन सक्छ।
तपाईंको ग्राहकको समस्या क्षेत्रहरूको पूर्वानुमानले तपाईंलाई कम आक्रामक विक्रेता जस्तो देखिन सक्छ र समस्या समाधान गर्ने जस्तो देखाउन सकिन्छ। व्यक्तिहरू तब तपाईंसँग राम्रोसँग बढि बारम्बार सम्पर्क गर्न चाहन्छन्, र यसो गरेर तपाईं नेतृत्व उत्पादनको प्रक्रियामा पोषणको लागि राम्रो अवसर सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ।
B2B नेतृत्व उत्पादन केवल संख्याको बारेमा मात्र होईन, यो दुबै ग्राहक र ग्राहकको लागि तपाईंको लागि बजारको रूपमा पूरा गर्ने यात्रामा सफल हुँदै आएको सम्बन्ध र सम्बन्ध विकासको बारेमा हो। संचार B2B नेतृत्व उत्पादनमा उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्न कुञ्जी हो, किनकि यो नेतृत्व उत्पादनको दिशामा सही दृष्टिकोण हो जसले व्यवसाय सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंलाई गर्व गर्न सकिन्छ!
टैग: प्रत्याशाb2bव्यापार सम्बन्धसंचारग्राहक अनुभवसहानुभूतिनेतृत्व पुस्ता
माधवी एक रचनात्मक सामग्री लेखक हुन् जुन B8B उद्योगमा ++ वर्षको अनुभवको साथ छ। एक अनुभवी सामग्री लेखक को रूप मा, उनको उद्देश्य व्यवसायमा मूल्य राख्नु भनेको आफ्नो अनौंठो सामग्री लेख्ने कला को माध्यम बाट हो। उनको उद्देश्य टेक्नोलोजी र व्यवसायिक संसारको बीचमा लिingu्ग शब्दको लागि प्रेमको साथ भाषिक पुल स्थापना गर्ने छ। सामग्री लेख्नुको साथै उनी र paint लगाउँछिन् र पकाउँछिन्!
DMP एकीकरण: प्रकाशकहरूको लागि डाटा-चालित व्यवसाय
तपाइँको लेखन कौशल कसरी सुधार गर्ने